ဘိုင်ကယ်အိုင် (အင်္ဂလိပ်: Lake Baikal; ရုရှား: о́зеро Байка́л, tr. Ozero Baykal; IPA: [ˈozʲɪrə bɐjˈkɑl]; တမ်းပလိတ်:Lang-bxr, မွန်ဂိုးလီးယား: Байгал нуур, Baygal nuur၊ အဓိပ္ပါယ် "သဘာဝအိုင်";)သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှေးအကျဆုံး ရေကန်ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း သန်း ၃၀ ခန့်ကတည်းကပင် တည်ရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အနက်ဆုံးသော အိုင် ဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှ အနက် ၇၄၄.၄ မီတာခန့်မျှ ရှိသည်။
အနက်အားဖြင့် ၅,၃၈၇ပေ( ၁၆၄၂ မီတာ) မျှ နက်သဖြင့် ဘိုင်ကယ်အိုင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရေအိုင်များတွင် အနက်ဆုံး နှင့် အကြည်လင်ဆုံး ရေအိုင်ဖြစ်သည်။ ဘိုင်ကယ်အိုင်သည် တန်ဂန်ရီကာအိုင် ကဲ့သို့ပင် ရှေးခေတ်ကာလက ကျောက်လွှာများ ရွေ့လျားမှုကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာသော ရေအိုင် ဖြစ်ပြီး လခြမ်းပုံသဏ္ဌန် ရှည်မျောမျော ရှိသည်။ ရေမျက်နှာပြင် ဧရိယာ ၁၂,၂၄၈ စတုရန်းမိုင် (၃၁,၇၇၂ စတုရန်း ကီလိုမီတာ) မျှ ရှိပြီး ဆူပီးရီးယားအိုင်နှင့် ဝိတိုရိယအိုင် တို့ထက် မျက်နှာပြင် ဧရိယာအားဖြင့် သေးငယ်သည်။ ဘိုင်ကယ်အိုင်သည် အပင်နှင့် သတ္တဝါ မျိုးစိတ်ပေါင်း ၁၇၀၀ တို့ နေထိုင်ရာ နေရာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ သုံးပုံ နှစ်ပုံကို ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားမည်သည့်နေရာတွင်မျှ မတွေ့နိုင်ပေ။ ယူနက်စကိုမှ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ အဖြစ် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ထိုဒေသသည် ဘားရတ်လူမျိုးစုတို့ နေထိုင်ရာ နေရာဖြစ်ပြီး ထိုလူမျိုးစုတို့သည် ကန်၏ အရှေ့ခြမ်းတွင် နေထိုင်ကြကာ ဆိတ်၊ ကုလားအုပ်၊ နွား၊ သိုး စသည်တို့ကို မွေးမြူကြသည်။ ဒေသ အပူချိန်သည် ဆောင်းရာသီတွင် အနှုတ် ၁၉ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ် (-၂ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) မှ နွေရာသီတွင် ၁၄ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးယပ် (၅၇ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်) အထိ ပြောင်းလဲမှု ရှိသည်။ ဘိုင်ကယ်အိုင်ကို "ညီအမအိုင်များ၏ အစ်မကြီး" ဟု တင်စား ခေါ်ဝေါ်လေ့ ရှိကြသည်။
↑ M.A. Grachev။ On the present state of the ecological system of lake Baikal။ Lymnological Institute, Siberian Division of the Russian Academy of Sciences။9July 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘိုင်ကယ်အိုင်&oldid=491872" မှ ရယူရန်
၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၁:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၁:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။